ho Best Granular sakafo milanja sy rafitra fonosana Manufacturer sy Factory |Xingyong
Mety amin'ny lanja ny granule, silaka, horonana na tsy ara-dalàna endrika vokatra toy ny vatomamy, voa, jelly, fries, poti-potato, kafe, granule, voanjo, puffyfood, biscuit, sokola, voanjo, yaorta sakafo biby fiompy, sakafo mangatsiaka, sns. dia mety ihany koa amin'ny fandanjana fitaovana kely sy singa plastika.
1.Fully mandeha ho azy ny dingana manontolo amin'ny famahanana, lanja, famenoana kitapo, daty fanontana, vokatra vita.
2.High marina sy ny hafainganam-pandeha avo.
3. Azo ampiharina amin'ny fitaovana isan-karazany.
4. Azo ampiharina amin'ny mpanjifa izay tsy misy fepetra manokana momba ny fonosana sy ny fitaovana ampiasaina betsaka.
1. Mahomby: Kitapo - fanaovana, famenoana, famehezana, fanapahana, fanafanana, laharan'ny daty/loty vita amin'ny fotoana iray.
2. Intelligent: Ny hafainganam-pandehan'ny fonosana sy ny halavan'ny kitapo dia azo apetraka amin'ny efijery tsy misy fiovana.
3. Asa: Ny fanaraha-maso ny mari-pana mahaleo tena miaraka amin'ny fifandanjana hafanana dia ahafahan'ny fitaovana famonosana samihafa.
4. Toetra mampiavaka: Miato ny fiasa mandeha ho azy, miaraka amin'ny fiasa azo antoka ary mamonjy ny sarimihetsika.
5. Convenient: Low fatiantoka, asa famonjena, mora ny fandidiana sy ny fikojakojana.
* Milina famonosana mandeha ho azy mitsangana lehibe
* Mulithead milanja
* Sehatra miasa* Z karazana fitaovana conveyer
* Conveyeur vokatra vita + mpandanja fanamarinana
teo aloha: Masinina fonosana mitsangana ho an'ny lafarinina sy vovoka
Manaraka: Sakafo mandeha ho azy Chips Banana Chips Potato Chips Packing Machine
milina famonosana granule
fonosana turnkey vahaolana
Fitaovana famonosana sakafo hanina
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Belt Conveyor elektrika, Belt Conveyor, Tubular Belt Conveyor, Skirt Belt Conveyor, Stainless Steel Screw Conveyor, Fonosana Belt Conveyor, Ny vokatra rehetra